Pep Guardiola oo qorsheynaya in shaqsi lama filaan ah uu ka dhigto caawiyihiisa cusub – Gool FM
Dajiye May 30, 2020
(Manchester) 30 Maajo 2020. Tababaraha reer Spain iyo kooxda Manchester City ee Pep Guardiola ayaa isku dayaya inuu helo caawiye leh tilmaamooyin qaas ah, kaddib markii caawiyihiisii hore ee Mikel Arteta uu u dhaqaaqay inuu hogaamiyo naadiga reer London ee Arsenal xilli ciyaareedkan.
Haddaba wararka ayaa waxay intaas ku sii darayaan in macalinka reer Spain ee Pep Guardiola uu si lama filaan ah u doortay mid ka mid ah xiddigihii hore ee kooxda Manchester City.
Pep Guardiola ayaa doortay Vincent Kompany, kaasoo ka tagay kooxda Manchester City dhamaadka xilli ciyaareedkii hore, si uu ugu biiro naadiga Anderlecht, isagoo haatan ah tababare iyo ciyaartoy.
Magaca Vincent Kompany ayaa wuxuu qeyb ka soo noqday liiska musharaxiinta uu doonayo Pep Guardiola in mid ka mid ah uu ka dhigto caawiye, iyadoo ay jiraan magacyo kale uu ka mid yahay Xabi Alonso oo xiriir wanaagsan la leh macallinka reer Spain.
Sida laga soo xigtay wargeyska “Daily Mail” ee dalka England, Manchester City ayaa kala hadashay Vincent Kompany inuu dib ugu soo laabto kooxda reer England mar labaad, si uu caawiye ugu noqdo tababare Pep Guardiola, laakiin xiddigii hore ee Sky Blue ayaa iska diiday dalabkan.
Si kastaba ha noqotee, Pep Guardiola ayaa doonaya inuu keensado kaaliye cusub ka hor bilowga xilli ciyaareedka soo socda, lamana filayo in Kompany uu imaan doono, sababa la xiriira inuu doonayo inuu guulo la gaaro kooxda reer Belgium ee Anderlecht.
Mbappé oo si xiiso leh kaga hadlay suurtagalnimada uu ugu guuleysan karo abaal-marinta Ballon d'Or